Faahfaahin Banaanbax maanta ka dhacay magaalada Jowhar | Baydhabo Online
Faahfaahin Banaanbax maanta ka dhacay magaalada Jowhar
Banaan bax xoogan oo looga soo horjeedo iska hor imaad xalay ciidanka dowladda Soomaaliya ku dhexmaray magaalada Jowhar ayaa saakay lagu qabtay magaaladaasi.
Dad weyne ka caraysan iska horimaadkii xalay ciidanka dowladda Soomaaliya ku dhexmaray magaalada Jowhar ayaa saakay isgu soo baxay bartamaha magaalada Jowhar.
Ciidamka ammaanka dowladda Soomaaliya ayaa si weyn u adkeeyay ammaanka magaalada Jowhar , waxaana ay dadka ugu baaqayeen in ay iska dajiyaan.
Guddoomiyaha Magaalada Jowhar ee xarunta Shabeelaha Dhexe Cabdulqaadir Maxamed Buurfuule ayaa sheegay in dadka kunool magaalada Jowhar looga baahan yahay in ay isdejiyaan islamarkaana la xalin doono dhacdii xalay ka dhacday magaalada Jowhar.
Iska hor imaad geystay khasaare kala duwan ayaa xalay ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya waxa uu ku dhexmaray magaalada jowhar ee xarunta gobolka Shabeelaha Dhexe.
Inta la xaqiijiyay 2 askari oo ka tirsan ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa ku dhintay iska hor imaadka xalay ka dhacay magaalada Jowhar, waxaana sidoo kale ku dhaawacmay 4 qof oo isgu jira askar iyo shacab.